Impahla Franchise - I-ejensi Yezezakhiwo | Franchiseek
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Izakhiwo Franchise
Okufakiwe Kwezakhiwo Zezakhiwo
Izakhiwo Zesakhiwo Zamuva
Imakethe yezakhiwo iyakhuphuka, futhi njengoba inani lomhlaba liqhubeka likhula ngezinga elihle kakhulu, liyaqhubeka nokusho ukuthi isidingo sezindlu siyohlala sikhulu.
Kungani amafa ezakhiwo
Uma ufuna i-franchise enamandla wokukhula isikhathi eside, ungabe usaya phambili. Nomaphi lapho uya khona, kwakhiwa izindlu ezintsha ngaso sonke isikhathi. Ezindala ziyathengiswa futhi kwakhiwa ezintsha. Ibhizinisi lepropathi yezakhiwo lishintsho lomsebenzi omuhle. Uzosiza abantu ukuthi bangene ileli yezakhiwo ukuthi yindlu yabo yokuqala, noma ngabe bayathatha umhlalaphansi futhi bafuna ukuthengisa impahla yabo bese bathuthela phesheya. Amafandesi empahla yezakhiwo awagcini nje ngokuthengisa izakhiwo, ngoba kunezinhlobo eziningi ezahlukahlukene zamalungelo wokuthengisa impahla athengiswayo.
Izinhlobo Zezakhiwo Zezakhiwo
I-Estate Agent Franchise - Qasha futhi uthengise izakhiwo nge-agency yezezakhiwo. Ama-Franchise ahlukahluka kepha ngokujwayelekile njenge-Frontise ejenti yefa
Ukulungiswa Kwempahla - ama-franchise anjenge-SRP neVerismart ahlinzeka ngokuphathwa kweqoqo lezindawo kubanini bomhlaba. Ukulungiswa kwendawo kanye namafreyimu okusungula kuhlinzeka abanikazi bendawo nemibiko yesimo sokuhlala noma nini lapho umqashi engena noma ephuma, nangesikhathi sokuqashisa.
Ukuthuthukiswa Kwasekhaya Nezakhiwo Zokwakha - kanye nesidingo sezindlu, kunesidingo sokulungiswa kwempahla nokwakhiwa kwezakhiwo. Izindawo zezindawo zokuhlala zingabandakanya ukuncishiswa kokungena, ukunwetshwa kwendlu nomsebenzi wokwakha.
Kunezinhlobo eziningi zamathuba wempahla ehlukene yempahla ethengiswayo. Kubalulekile ukuthi ukhethe i-franchise oyithandayo. Uma uthanda ukusiza abantu ukuthola ikhaya elifanele,-ke i-ejensi ye-estate agency ingakulungela.
Ezinye izinhlaka zepropathi zingahle zisetshenziswe njenge-franchise yokuphatha, noma i-franchise yasekhaya. Umuntu osebenza ethenga isitolo sokuphatha angavama ukuphatha abasebenzi bakhe abathengisa impahla noma ukulungisa izakhiwo. Nge-franchise yezakhiwo okuyi-management franchise noma esekhaya, uvame ukubheka ukukhiqizwa kwabasebenzi bakho futhi uphathe umsebenzi wabo ngenkathi ungakaze wenze ukwakhiwa noma ukuzithengisa (ngaphandle kokuthi ukhetha).
Thola ifulethi lakho lesakhiwo elifanele eFranchiseek.